ကင်ဆာသည်ကုလို့ပျောက်နိုင်သလား? | OnDoctor
😷 83,566 Total Cases
😥 1,810 Deaths
😇 63,366 Recovered
By Ei Cho Dr.	 On Sep 10, 2018 Last updated Nov 30, 2019
ကင်ဆာသည် ကုလို့ရနိုင်သောရောဂါတစ်ခုဟုဆိုနိုင်သလား?ဟူသောမေးခွန်းသည် ကင်ဆာခံစားနေရသောဝေဒနာရှင်နှင့်မိသားစုအတွက် အလွန်သိချင်သောမေးခွန်းတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကင်ဆာဟုဆိုလိုက်လျှင် လူအများထိတ်လန့်တကြားကြောက်ရွံ့မိသောရောဂါဆိုးတစ်ခုပါ။ဆက်ကုသင့်သလား?မကုဘဲသက်တောင့်သက်သာထားရမလား?ဟူသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချရန်အမြဲတွေဝေတတ်ကြပါတယ်။
ကင်ဆာသည် ကုလို့ရနိုင်သလားဟူသောမေးခွန်းအတွက်အဖြေသည် ရနိုင်သည်ဟုဖြေရလိမ့်မည်။သို့သော် အရာအားလုံးအတွက်မဆိုလိုပါ။ချို့ယွင်းချက်တွေတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။
ကုလို့ရနိုင်သည်ဟုဆိုရာတွင် ကင်ဆာသည်လုံးဝပျောက်ကင်းပြီဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။အချို့ကင်ဆာများသည် ကုသရျ်ပျောက်ကင်းခဲ့သော်လည်း အလျင်အမြန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ဥပမာ ဝှေးစေ့ကင်ဆာသည်သည် ပျောက်ကင်းပြီး ၃နှစ်အကြာပြန်လည်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာသည် ပျောက်ကင်းပြီ ၁၅နှစ်သ်ု့မဟုတ် နှစ်၂၀အကြာမှပြန်ဖြစ်တတ်သည်။
ကင်ဆာကုသမူထိရောက်နိုင်စွမ်းသည် လူနာရဲ့ဖြစ်ပွာသောကင်ဆာအဆင့်။အသက်အရွယ်။အောက်ခံပူးတွဲရောဂါရှိမရှိ။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်နေထိုင်မူပုံစံအပေါ်များစွာမူတည်ပါသည်။
ထို့အပြင်ကင်ဆာပျောက်ကင်းမူသည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းအပေါ်ဉ်လည်း လုံးဝကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်။ကင်ဆာရောဂါသည် ပျောက်ကင်းနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသော်လည်းပျောက်ကင်းသည့်တိုင်အောင် စဉ်ဆက်မပြတ်ကုသရန် သေချာပေါက်လိုအပ်ပါတယ်။ကုသမူခံယူမူသည် လပေါင်းများစွာ။နှစ်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ် ဘဝတစ်လျောက်လုံးဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။လုံးဝကုသရျ်မပျောက်ကင်းနိုင်သောကင်ဆာများကို Palliative careလို့ခေါ်တဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိနေနိုင်မူနည်းလမ်းများဖြင့်ကုသခြင်းကို ရွေးချယ်ကုသပေးရပါတယ်။
ကင်ဆာကုသပျောက်ကင်းပြီ အချ်န်တစ်ခုကြာသည်အထိပြန်မပေါ်လာခဲ့သော် လုံးဝစိတ်ချရသောအနေအထားလား?
ကင်ဆာကုသမူခံယူပြီးနောက် အချိန်အတန်ကြာ မည်သည့်လက္ခဏာမှမခံစားရလျှင် လုံးဝပြန်မဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆထားနိုင်ပါတယ်ဝ။ပျောက်ကင်းသည်ဟုယူဆမရနိုင်ပါ။ကိုယ်ထဲတွင် ကင်ဆာဆဲလ်များရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။
ကင်ဆာကုသသောနည်းလမ်းများမှာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း။ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့်ကုသခြင်း။ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းစသည်တို့ပင်ဖြစ်ပါတယ်။မည်သည့်ကုသမူကိုဦးစွာပြုလုပ်ရမည်ဆိုသောသတ်မှတ်ချက်မရှိပါ ကင်ဆာအမျိုးအစားနှင့်လူတစ်ဦးချင်းဆီအလိုက်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။
-အရေပြားအကျိတ်ကင်ဆာစသည့်ကင်ဆာများသည်အခြားကင်ဆာများထက် ပျောက်ကင်းနိုင်ချေရှိနိုင်သည်ဟု အခြားအရာများကိုထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ သတ်မှတ်ရျ်ရနိုင်ပါတယ်။
အူလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြု အဏုဇီဝပိုးများ